Geesigii Labada Goor Dhashay..!!(Xusuusta kulankii Duuliye Col. Axmed Dheere) | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
W/Q. Cabdi Yuusuf Faarax
Waa sanadkii 1995kii, goobtu waa Xaruntii golihii dib u heshiinta ee Muqdisho. Amin casar liqii ayaan soogalney aniga iyo saaxiibkeey Xalane iridda wayn ee xaruntaas oo inkastoo aan markaan doonno imaan jirney, shaqooyin badana aan ka qaban jirney, haddana maanta waxaan u soconaa wareysi.
Runtii ma anaan garaneyn inaan la kulmi doonno shaqsi sidaa u maqaam sarreeyey aniga agteyda. Intii anaan galin dhismihii weynaa ee xafiisyada golaha dib u heshiintu ku shaqeyn jirey, waxey isheeydu qabaneysey laban ruux oo kuraas cadcad ku fadhiya meel dhexe oo banaan oo dhir ku beereyd. Labada ruux mid waan garaneyey wuxuu ahaa Dr. C/raxmaan Macalin ( Baadiyoow), gudoomiyihii golaha aan joogno, laakiin ma aanan garan qofka uu yahey ninka kale ee la fadhiyey.
Dr. Baadiyoow ayaa noo gacanhaatiyey, wuxuuna nagu yiri ( kaalaya ninkaan idin baree). Is-gacan qaad iyo is-bariidin yar kadib, wuxuu na barey ninkii la joogey oo ahaa duuliye Axmed Maxamed Xasan, oo lagu xasuusan ogyahey (Col. Axmed Dheere) wuxuu ahaa sargaalkii dayuuradda milatari kala goostey Hargeysa ee ku dajiyey Jabouti sanadkii 1988kii, kolkaas oo dagaallo ba’ani ku dhexmarayeen ciidamadii milatariga ee taliskii Siyaad Barre iyo xoogaagii jabhaddii mucaaradka ee dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed (SNM).
Wuxuu ahaa, nin cas oo dheer, islamarkaasna ay ku joogto bidaar qurxoon. Aad ayaan ugu farxey lakulankiisa, salaan labaad ayaa ku celiyey. Kasakoow, inkasta oo aan ahaa suxufi jaanis gaad ah oo heley xog muhiim ah oo uu tabiyo, hadana waxaan si aad iyo aad ah u xiiseeynayey inaan xog ka helo dhacdadii isaga la xiriirtey oo aan idaacadaha ka maqley waagaas, hase ahaatee aanan wax war iyo wacaal ah midna dib uga helin wixii uu ku dambeeyey iyo sida barigaas wax u dheceen toona.
Sidoo kale, waxaan aad u xiiseynayey inaan la kulmo halyeey Soomaaliyeed oo qorey taariikh mudan in lagu dhiggo far Dahab ah.
Dr. Baadiyoow oo ahaa ninkii noo balamiyey oo iskaaya barey wuu noo kala dhexbaxay Axmed Dheer, aniga iyo saxiibkeey Cali Xalane, waxaana na dhex marey wada sheekeysi aad u dheer oo goor dambe oo habeenkii aanu isku gaarney.
Col. Axmed intii aanu wareysaneyney, wuu dhowr goor muujiyey tawaaduc iyo cudurdaar uu ku muujunayey inuusan wax wayn oo geesinimo oo sidaas loogu qadariyo uusan sameyn, taasna waxey muujineysey akhlaaqdiisa iyo shaqsiyadda macaan ee uu dhashey.
Duuliye Axmed, wuxuu xiligaas u ahaa, markii ugu horreysey ee u dalka dib ugu soo laabtey tan iyo markii uu goostey ciidankii u uka tirsanaa oo dalka ka cararey sanadkii 1988kii, wuxuuna markaas ka yimid dal yar oo Yurub ku yaal oo lagu magacaabo Luxembourg.
Wareysigii aan la yeelaney oo aad u dheeraa, waxaan kusoo daabacney wargeyskii Dadka ee kasoo bixi jirey Xaruntii Cilmi baarista iyo daraasaadka bulshada ee ( HACHS).
Tifatirihii wargeyska alaha u naxariistee C/Qaadir Maxamed Mursal ayaa markii uu wareysiga akhriyey aad ugu bogey aadna u ugu farxey, wuxuuna durba ka codsadey, allaha u naxariistee farshaxamiistihii weynaa Cabdulaahi Alif inuu ku farayaeesto sawir gacmeed cabbiraya dhacadaas iyo geesigeeda, waxaana bogga hore lagu soo dhajiyey wargeyska cadadkiisii todobaadleha ahaa ee soo bixi jirey Maalinta Isniinta ah.
Wareysigaasi dheeraa ee uu Col. Axmed nasiiyey oo ka koobnaa, nolashiisa oo dhan, dhalashadiisii, waxbarashadiisii, meelihii uu wax ku bartey iyo shaqooyinkii ciidan ee uu soo qabtey, ayaanan wada xasuusan, laakiin waxaan soo qaadan doonaa qaybtii la xiriirtey dhacdadii Hargeysa.
U yeeristii iyo safarkii Hargeysa
Duuliye Axmed Maxamed Xasan oo jooga goobtiisii shaqo oo aheyd xarunta ciidanka cirka ee Ballidoogle oo u ku yaal 90 km galbeedka Muqdisho, ayaa lasoo gaarsiyey farriin uga timid taliska dhexe ee ciidanka cirka ee Xamar, fariintaasuna waxeey aheyd inuu deg deg kusoo galo Muqdisho.
Ma jirin su’aal u furneyd waa amar ciidan, waxa uu durba usoo safrey Xamar, wuxuuna isla habeenkii intii aan la gaarin subixii oo ka ballansanaa xarunta dhexe ee ciidanka ee Afyooni, kulan la tashi ah ugu tagey saaxiibkiis Gaashaanle sare Cali Dhayaar oo ahaa sarkaal ay ka wada tirsanaayeen ciidanka cirka, hase ahaatee ka sarreyey kana khibrad badnaa, waxeyna iska wareysteen waxa uu noqon karo waxa loogu yeerey, wuxuuna xiligaas Axmed qabey tuhun ah in loo diri karo dagaalka goboladii Waqooyi Galbeed xiligaas ka socdey.
Markii ay kulmeen isaga iyo saaxiibkii, waxay wadajir isula fahmeen waxa uu yahey amarka sugaya barri subax oo ah inuu Hargeysa u baqoolo, hase ahaate waxaa walaac badan ay kala kulmeen oo ay xadidi waayeen sida uu ka yeelayo, waxa xiga safarka Hargeysa oo ah in la fuliyo duqeyn dayuuradeed oo uu khasaare nafeed iyo mid maaliyadeed oo ba’an ka dhalan karo.
Col. Cali Dhayaar oo Axmed saaxiibkiis ahaa, walaac kadib wuxuu ugu soo gaabiyey warkii ( saaxiib dadkaaga inaad badbaadiso oo aadan layneynin ma aha mid laguu sheegayo, wixiisa kale oo aad yeeleyso adigaa yaqaan..).
Walwal iyo walbaar ayuu Axmed Dheere habeenkii oo dhan sariirta la gadgadoomayey, waxaana uuna iswaydiinayey tabaha iyo xeeladda u furan ee uu yeeli karo haddii barri subax lagu yiraahdo dayuuradaan Hargeysa u socota raac, maalinta xigtana lagula wareejiyo garoonka dayuuradaha diyaaraddii uu ku duqeyn kahaa isla magaaladaas.
Ogoow oo waxa uu laynayo waa dadkii loosoo tababarey inuu iyaga cadowga ka difaaco. Waa arin aad iyo aad u kharaar.
Waa sidii uu qiyaasayaye, markii uu subixii iska xaadiriyey Xaruntii ciidan ee looga yeerey, waxaa loo sheegey meesha uu u socdo iyo shaqada uu halkaas ka qabanayo labadaba.
Subixii xigey maalinkii uu Hargeysa tagey, waxaa Axmed Maxamed Xasan lagu wareejiyey mid ka mid ah laba dayuuradood oo u diyaarsanaa iney duqeyn subaxaas fuliyaan, midda kalena waxaa la wareegey sargaalkii asaga ka sarreeyey oo duqeynta hogaamin lahaa.
Islamarkiiba waxaa garoonka Hargeysa oo magaalada duleedkeeda ku yaal ka duuley labadii dayuuradood oo midda dambe Axmed dheere ku duulayo, tan horena sargaalka hogaanku uu ku duulayo.
Axmed ilaa xiligaas ma qaadan wax go’aan ah waxa u uka yeelayo amarka la siiyey, wuxuuna dhex makhuuranaya walaac iyo walbahaar, waqti uu kaga sii fikiro waxa uu yeeli doonana uma harin, laakiin wuxuu meel ku guntadey inuusan marna waxyeello soo gaarsiin dadkiisa..
Labadii dayuuradood oo aad u dheereynaya ayaa durba kor marey magaalada, waxeeyna u jiheysteen dhinaca galbeed. Duuliye Axmed Waxeey ishiisu qabatey kumaan shacab ah oo magaalada kasii qaxaya iyo qaar kale oo dadsan geedaha hoostooda.
Islamarkiiba waxaa jiireysey dayuuraddii hore oo biloowdey duqeyntii, hase yeeshee dayuuraddii labaad masoo jiirey. ( geesi ilaahey ma xiro, fuleyna laba jeer buu dhintaa..) waa tii la dhihi jireye Axmed, wuxuu durba qaatey amar diido dadban wuxuuna ku marmarsiyoodey in ciladi haysato, markii uu sargaalkii ka horeey ku amrey inuu soo jiireeyo oo uu duqeynta ducadiisa ka bilaabo.
Islamarkiiba, hoos ayuu u daadajiyey, si uga dhuunto raadaarka ciidanka Farasiiska oo Jabouti fadhiyey oo u uka baqayey iney toogtaan, wuxuuna durba galey xuduudda Jabouti iyadoon cidna dareemin.
Durba duuliye Axmed wuxuu arkey isagoo dul heehaabaya badda dusheeda, wuxuuna gudaha usii galey oo uu kusii fogaadey badda, halkaas oo uu ku faarujiyey rasaastii iyo bambaanooyinkii uu sidey.
Markii uu muddo badda dul heehaabayey, ayuu nasiib wanaag si lama filaan ula kulmey meel banaan oo xeebta ah oo biyaha baddu ka durkeen habeenkii, halkaas oo uu inta xeeladeysan ugu soo dhawaadey tartiib si nabadgalyo ah ku fariisiyey dayuuraddii xeebta, wuxuuna ka dagey asagoo badqaba.
Waqti kooban markii uu ku lugeynayey xeebta ayaa waxaa arkey kaluumeysato reer Jabouti ah, kuwaas oo markii ay arkeen ninkaan qafilan ee duuliyaha ee meesha maraya la yaabey, waxeyna weydiiyeen wuxuu yahey iyo waxa halkan keeney, wuxuuna u sheegey inuu Soomaaliya kasoo goostey oo dayuurad wadey oo xeebta dhigey.
Duuliye Axmed waxaa durba loo gudbiyey magaalada Jabouti halkaas oo warkiisa wakaaladaha wararku kala boobeen, halkaas oo ay markii ugu horeeysey dowladda Soomaaliya ka warheshey inuu goostey oo uu bad qabo, waayo waxaa markii hore loo qaatey in ay dayuuraddii la burburtey, maadaama fariintii ugu dambeysey ee laga heley aheyd iney ciladi haysato.
Taliskii Siyaad Barre aad iyo aad ayeey arinkaas uga carootey, waxeeyna u aragtey in duuliyahaas oo aan gacanteeda kusoo noqon uu kashifaad ku yahey howsha milatari ee waqtigaas ka socotey gobolada waqooyi oo ay dowladdu aad u qarineysey.
Islamarkiiba, waxaa la joojiyey duqeeyntii dayuuradaha iyadoo laga shakiyey duuliyayaashii Soomaalida ahaa, waxeyna markii dambe sida la xaqiiyey ay dowladdu soo kireysatey calooshood u shaqeystayaal u dhashey dalka Koonfur Afrika oo la wareegey howlihii duqeynta.
Dhinaca kale waxa uu taliskii Soomaaliya ku cadaadiyey dowladda Jabouti in ay si deg deg ah ugu soo gacangaliso duuliyaha goostey, taas oo ay dowladda Jabouti ka dhago adeygtey, waxa uuna duuliye Axmed markii dambe galey xarun ay qaramada midoobey ku lahey magaalada Jabouti, wuxuuna halkaas ku jirey ilaa uu magangalyo ka heley dalka Luxembourg oo uu markii dambe dagey.
Galmudug May 17, 2021
Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa magacaabay Guddi soo baaraya kiiska afduubka iyo dilka sheekhii caanka ahaa ee Sheekh Cali Axmed Faarax. Wareegto...
Hirshabelle May 17, 2021
Guddiga Fatahaada Maamulka Hirsabeelle ayaa celin kulul u diray Wasaaradda Maaliyadda xukuumadda xilgaarsiinta Federaalka, kadib markii ay soo saartay qoraal ay ku beenisay eedeyn...
Xukuumadda May 17, 2021
Wasiiiru dowlaha Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukuumadda xilgaarsiinta ayaa soo saaray qoraal uu ku baab'inayo dhammaan heshiisyadii ay Wasaarada kula jirtay shirkaddaha gaarka loo...
Doorashada May 17, 2021
Waxaa shalay soo baxay qoraal ay Midowga Musharixiinta shaki uga muujiyeen dhexdhexaadnimada Ra'iisal wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble. Qoraalkaas oo ay faafiyeen xubno ka...
Ra'iisal wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa u jawaabay Midowga Musharixiinta, isagoo shaaciyey inay Soomaaliya galeyso Doorasho. "Waxaan ku soo laabtay Caasimadda Muqdisho...
Bulshada May 17, 2021
Waxaa caawa magaalada Muqdisho ku geeriyooday weriye ka tirsan saxafiyiinta ka howlgala caasimadda Muqdisho oo maalmihii danbe xanuunsanaa. Allaha u naxariistee waxaa Isbitaalka Yardameli ee...
Banaadir May 16, 2021
Senator Muuse Suudi Yalaxow ayaa sheegay inaan la joojin doonin Geela loogu deeqayo ciidamada kasoo horjeeda muddo kororsiga ee taageersan mucaaradka, wuxuuna farriin u...
Galmudug May 15, 2021
Xaalad halis ah ayaa ka dhalatay dilka Sheekh caan ka ahaa magaalada Gaalkacyo oo 11-ka May 2021 meydkiisa laga helay degaanka 'Xero Jaalle' ee...
Xog cusub May 12, 2021
Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helay diidmada ay dowladda Federaalka Soomaaliya kala hortimid Ergayga gaarka ah ee Midowga Afrika u soo magacaabay Soomaaliyam kadib...
Hirshabelle May 11, 2021
Madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa khashifay dhaqaale ay beesha caalamka ugu talogashay fatahaadda inay xayiree wasiiro ka tirsan xukuumadda Xilgaarsiinta. Kadib markii...